कुन बार जन्मिएका र कुन राशीका मान्छेले कति धन कमाउछन् ?हेर्नुहोस
आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो…
क्यान्सरको उपचार गर्दागर्दै घर जग्गा सकियो । उपचार गर्ने पैसा छैन । नुवाकोटका उत्तम श्रेष्ठ…
काठमाडौं- नुवाकोट तिनघरेका उत्तम श्रेष्ठ ३ बर्षदेखि क्यान्सर रोगसँग लडिरहेका छतन् । हाल भक्तपुर नालाको क्यान्सर अस्पतालमा जीवन र मृत्युको दोसाधमा बाँचिरहेका उत्तमको उपचार गर्दा गर्दै सबै सम्पत्ति सक्किसकेको छ । यसैबिच एउटा झुप्रो पनि केहि…
के हो शनिको साढे साती ? कसरी असर गर्छ यसले ? कसरि यसबाट बच्ने ? जान्नुहोस
ज्योतिष कुनाएजेन्सी। ज्यातिषका अनुसार नवग्रहमध्ये एउटा ग्रह हो शनि । शनिको साढे सात वर्ष चल्ने एक प्रकारको दशालाई साढे साती दशा भनिन्छ । ज्योतिष तथा खगोलशास्त्रको नियमअनुसार सबै ग्रहको एउटा राशिले अर्को राशिको भ्रमण गर्छ । यसैप्रकार जब…
काठमाडौं। क्षणभरमै एउटा परिवारमा बज्रपात भयो । आमाको न्यानो काखमा हुर्किदै गरेको छोरा टुहोरो भयो अनि जसलाई सुखी र खुसि राख्ने सपना बोकेर परदेशिएको श्रीमानको सपना झर्यम्झुरुम्मा फुट्यो । आमाको न्यानो काख र मायामा हुर्कदै गरेका साइमन आमाको…
मनिला – फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा समेत धक्का महसुस हुनगरी उत्तरी फिलिपिन्सको जाम्बालेसलाई केन्द्र बनाएर ५.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भूगर्भ सर्भेले भने उक्त भूकम्प ६.३ म्याग्नीच्यूडको रहेको जनाएको छ । भूकम्पको केन्द्र…
कर्मचारीका नेता भन्छन्: ‘भनेजति तलब बढाउनुहोस, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दैनन्’
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणका काम तिव्र गतिमा सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु मन्त्रालयको ढोका नै थुनेर बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेका छन् । यता बजेछ निर्माणको प्रक्रिलया शुरु भइरहँदा कर्मचारीका…
नायक आर्यन सिग्देल चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’बाट चम्कने दाउमा छन् । आर्यन सिग्देल केही बर्ष अगाडिसम्म नेपाली चलचित्रमा सर्वाधिक चलेका र बिकेका नायक थिए । तर, विचमा जस्ता चलचित्रमा पनि काम गर्दा उनको स्टारडम खस्कियो र नयाँ नायकहरुले उनलाई…
काठमाडौँ । विवाहपछि आमाबाबू बन्ने रहर सबैको हुन्छ । तर प्रजनन समस्याको कारण कतिपय महिलामा बाझोपनको समस्या रहेको हुन्छ । जब महिला विवाह गरेर बच्चा जन्माउन असमर्थ हुन्छिन् त्यतिबेला मात्र आफु बच्चा जन्माउने नुसक्ने रहेको थाहा पाउँछिन् । जुन…
दुखत खबर :बिहेको पाँच दिनमै वियोग, एक पलमै सिर्जनाको जीवनमा छायो अन्धकार
पवन पौडेल दमौली। पोखरा ७ मासबार निवासी सिर्जना राउतले बिहे गरेको खुसी यति चाँडै अन्त्य होला भन्ने सोचेकी थिइनन्। तर सोमबार दिउँसोको एक पलले उनको जीवनमा अन्धकार ल्याइदियो। वैवाहिक साइनो गाँसेको पाँच दिनमा म्याग्दे १ गुणादीमा भएको…
अन्तर्वार्तामै नायक र भिलेनको फाइट काण्ड :निर्देशकको फोनबाट लाइभ धम्कि,कलाकारहरुको भयो बेहिजत…
काठमाडौं । केहि दिन अगाडी मिडियामा अन्तरबार्ताकै क्रममा झगडा गर्ने कलाकार टिम फेरी मिडियामा आएका छन। यही बैशाख १३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘कालो वर्ष’प्रचारप्रसार छ ।भूकम्प र बैदेशिक रोजगारीको समस्याका बारेमा निर्मित चलचित्रको…